Raspberries - berry simnandi kakhulu futhi ewusizo. Kuyinto namanzi, elimnandi futhi amnandi, nazo zonke le linesizotha ngokuphelele. Sikwazi ukukhula nezihlahla cishe kunoma iyiphi inhlabathi futhi ezindaweni ezahlukene zezulu. Kodwa ungakhohlwa ukuthi imvelo bangaphandle kanye nokusetshenziswa lwendlela yokulima efanele kuthinte kakhulu isivuno. On the bush efanayo ingatholakala njengoba amajikijolo ambalwa amancane ambalwa Kilos zezithelo namanzi. Hhayi indima okungenani ekutholeni isivuno high kudlala esifike ngesikhathi ukufakelwa raspberry.
Kungani singenayo Akudingeki ukushintsha?
La majikijolo, kanye nanoma yimuphi omunye isitshalo engadini, kudinga iqoqo elithile izakhi trace ukuthi isihlahla uthola enhlabathini. Uma ama-raspberry kukhona endaweni eyodwa iminyaka eminingi, inhlabathi kancane kancane mpilo, ngisho ukugqoka abakwazi ukulungisa isimo. Amajikijolo kwi ukuncibilika ehlathini, isivuno uwela, wanciphisa inani amahlumela. Yingakho ama-raspberry ukufakelwa kumele kwenziwe njalo eminyakeni 3-4, ngoba ngisho ku Malinniki zasendle akuzona kuyo leyo ndawo efanayo. Endle okusajingijolo ezihlabayo akuvamile ukukhula endaweni efanayo iminyaka engaphezu kuka-10-12, kanye fruiting obuningi siyenzeka kuphela eminyakeni 3-5. Khona-ke sezihlahla emidala, futhi amahlumela amasha ziyindawo amasha ajabulisayo.
Zitshala raspberry: ukutshala izinsuku
Kwakucatshangwa ukuthi ehlathini ungayithola enye okungenani ekwindla, okungenani entwasahlobo. Nokho, abalimi abaningi bathambekele ukucabanga ukuthi isikhathi kahle zitshala raspberry - kungcono ekupheleni kwehlobo. Abaningi bathi kwesikhathi best for ukudluliselwa amahlumela ngo-September noma ekuqaleni kuka-October, kodwa kumelwe sikhumbule ukuthi izinto zokutshala kufanele abe nesikhathi nezimpande phambi frost. Ngakho-ke kudingekile ukuba ugxile endaweni ethize zezulu eside sezulu. Futhi uma ehlobo kwakubanda futhi ngeke kuphole ekwindla yesithwathwa ekuseni, kungenzeka ukuba bafeze ukufakelwa ngasekupheleni July. Okusajingijolo entwasahlobo ukufakelwa ezenziwe ngaphambi kwadingeka isikhathi bandisa izinso.
Ukuze esiphelweni khetha amahlumela amasha green ezingazange izithelo. Khona izithombo zihlolwa ngokucophelela, ababuthakathaka, zondile futhi onesifo sifanamsindvo kulahliwe. Okungenhla-phansi iqhaza amahlumela inqanyulwa kuze kufinyelele 30-35 cm, izimpande kancane sesibolile noma ilimele ziyasuswa ukuba amahlumela enempilo.
Zitshala raspberry: imishini yezolimo
Malin zidluliselwa ku-imithombo noma anemifantu ka 20-35 cm ukujula. Izithombo sijulise ezingeni elifanayo lapho besakhula phambi ke wafafaza umquba kanye embozwe inhlabathi, okuyinto kancane tamped. Khona-ke sezihlahla bazithela - 6-8 wamalitha yisithombo ngamunye. On nenhlabathi ezomile emseleni noma imbobo ugcwele hhayi ngokuphelele, kwasala engu indawo iqoqo amanzi. Ngo overmoistening phansi raspberry isitshalo emibhedeni ephakanyiswe, namanzi angadingeki isuswe nge mezhryadnyh imisele. Ngemva ukufakelwa inhlabathi cishe the hlahla kumele zamulchirovat, njengoba semboza ngabo izithombo zezihlahla ungasebenzisa sawdust, Peat amagxolo ezomile, utshani nokunye. N.
OKUBALULEKILE: ngaphambi zitshala, qiniseka ukuthi raspberry encishisiwe ukukhiqiza ngenxa yokuntuleka umsoco, kunokuba khona ngenxa yanoma iyiphi isifo noma inkathazo. Kungenjalo, ngisho nalapho umuntu eshintshashintsha ukuhamba endaweni okusajingijolo isivuno esihle esisha ngeke bakwazi ukuthola.
Indlela ukucacisa ripeness ikhabe: izindlela eziyisisekelo
Yini inyama izimvu zohlobo ezifuywa eRussia
Izinhlobo Iningi imvu. Hissar zohlobo: incazelo kanye nezithombe
Yini Lesi sihloko sithi 165 Criminal Code of the Russian?
Ukuhlanza: phraseologism value. izibonelo yokusetshenziswa
Dala wobuciko: isobho kwasolwandle
"Rodeo Drayivu" - Petersburg aquapark
Kusho ukuthini ukuba ujabule? Ukucabanga ngesihloko esithi okuphakade.
"Tarkhany" (Manor Lermontov): izithombe, izinkomba zokushayela kusuka Saratov kanye nokubuyekeza
Souvenir Mashi 8 ngezandla zakhe. Izipho ngoMashi 8 ngezandla zakhe: isigaba master
Izintela uhlelo intela njengoba inkinga inqubomgomo esesidlangalaleni
Konstantin Zyryanov: Biography of the ovelele kubadlali Russian